people Nepal » बच्चालाई सिकाउनै पर्ने ८ कुरा बच्चालाई सिकाउनै पर्ने ८ कुरा – people Nepal
बच्चालाई सिकाउनै पर्ने ८ कुरा
सानै उमेरदेखि स्वस्थ्य दिनचर्या कसरी अंगाल्ने भन्ने कुरामा अभ्यस्त गराउन सकियो भने त्यसले जीवनभर फाइदा पुर्‍याउँछ । बच्चालाई चाडै उठाउने र उठ्नसाथ मनतातो पानी पिउने बानी गराउनुहोस् । बिहान उठ्नसाथ पिउने पानी शरीरको लागि लाभदायक छ । यसले शरीरका अंगहरुलाई सक्रिय गराउँछ ।
३. दिसा-पिसाब गराउनुहोस्
अक्सर आमाबुवा बच्चालाई कुन समयमा दिसा-पिसाब गराउने भन्ने कुरामा चासो राख्दैनन् । त्यही कारण बच्चाहरुको दिसा-पिसाब गर्ने बानीमा अनियमितता हुन्छ । कहिले घुम्न गएको बेला त कहिले यात्रामै पनि उनीहरुलाई दिसा लाग्छ । यसले यात्रालाई झन्झटिलो बनाउने नै भयो ।
४. ब्रेकफास्ट लिन
सानै उमेरदेखि स्वस्थ्य ब्रेकफास्ट लिने बानी गराउनु पर्छ । दिसा-पिसाब त्याग गरिसकेपछि बच्चालाई ब्रेकफास्ट दिनुहोस् । पछि यो उनीहरुको बानीकै रुपमा विकास हुन्छ । बे्रकफास्टमा तारेको, भुटेको वा बजारमा पाइने तयारी खानेकुरा होइन, आफैले तयार गरेको ताजा खानेकुरा दिनुहोस् । संभव भएसम्म तेलरहित खानेकुरा दिनुहोस् । यसमा फलफूल र दुध सामेल गर्नु सर्बोत्तम हुन्छ ।
५. योग र व्यायाम गर्न सिकाउनुहोस्
बच्चाको शरीर लचिलो हुन्छ । यहि उमेरदेखि योग तथा व्यायाम गर्न सिकाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । नियमित योग एवं व्यायाम गर्‍यो भने उनीहरुमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता त बढ्छ नै, पढेको कुरा पनि स्मरण गर्न सक्छन् । सानै उमेरमा योग, व्यायाम, ध्यान गर्न सिकायो भने उनीहरु खराब लतमा लाग्ने भय पनि रहँदैन ।
बच्चालाई आफ्नो कामका लागि अरुमा निर्भर रहने बानी हटाउनुहोस् । कपि-किताव मिलाउने, आफ्नो पहिरन लगाउने, हातखुट्टा धुने, खानेकुरा खाने, खेलौना मिलाउने जस्ता काम बच्चालाई गर्न दिनुहोस् । यसले उनीहरुले श्रमको महत्व त बुझ्छन् नै, तपाई अतिरिक्त झन्झटबाट पनि मुक्त हुनुहुनेछ । साथसाथै बच्चा शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त हुन्छन् ।
उनीहरुलाई मीठो ख्वाउने भन्दा पनि स्वस्थ्यकर खानेकुरा ख्वाउने बानी गरौं । किनभने बच्चाको जिब्रोलाई जस्तो खानेकुरामा बानी पार्‍यो, त्यसैमा स्वाद भिज्छ । सकेसम्म उसिनेको खानेकुरामा अभ्यस्त गराउनु पर्छ ।
उनीहरुको खाना खाने तालिका नियमित गराउनुहोस् । ठीक-ठीक समयमा खानेकुरा खान अभ्यस्त गराउनुपर्छ । रातको खाना घाम डुब्नुअघि नै खान अभ्यस्त गराउनुपर्छ । यसले उसको पाचन यन्त्रमा नराम्रो असर पर्दैन । खाना खाएको केहि समयपछि मात्र सुत्न दिनुपर्छ ।
कसरी खाने, कसरी हिँड्ने, कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी अरुको सामुन्ने प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा सानै उमेरदेखि अभ्यस्त गराउनु प्रभावकारी हुन्छ । बच्चालाई टेबल म्यानर सिकाउनुहोस् । हिड्ने र बोल्ने शैली सिकाउनुहोस् । पाहुना आउँदा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा पनि सिकाउनुहोस् । शिष्टचार पालना गराउनुहोस्, जसले बच्चाको कारण तपाई लज्जित हुनुपर्ने छैन ।